DHAGEYSO Madaxweynah Jubaland oo ka hadlay waxyaabaha ay dowlada ku dhaliilsan yihiin. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Madaxweynah Jubaland oo ka hadlay waxyaabaha ay dowlada ku dhaliilsan yihiin.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kulan kula qaatay guddiga xalinta khilaafaadka ka dhex jira dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadda ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo ay dowlada ka tabanayaan.
Axmed Madoobe oo ka hadlayay kulan ka dhacay Magaalada Kismaayo oo ay ka qeyb galeen Xildhibaanada Aqalka Sare ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka baxday ballamo ay horay maamul goboleedyada ula galeeen.
Waxaa uu xusay in deegaanada maamulka Jubbaland ay ka jiraan dhibaatooyinka ugu badan ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab taasoo saamayn weyn ku yeelata shacbaka halkaasi ku nool.
dowladda ayuuna ku eedeeyay inaysan ku guulaysan hoggaaminta Howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab sidoo kalena aysan dowlada dhexe maamulada ku wareejin saanad dagaal oo horay loogu balamay in lagu wareejiyo si loogu qaado howl galada AL-shabaab looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin.
Hadalka madaxweynaha Maamulka Jubaland ayaa imaanaya ayadoo dahwaan kulan ay hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya ku yeesheen magaalada Kismaanyo ay ku sheegeen inay hakiyeen wadashaqayntii dowlada dhexe kala dhexaysay.
Sidoo kale waxaa baaqday kulan uu madaxweynaha Soomaaliya isugu yeeray gudiga amniga qaranka oo ay qayb ka yihiin masuuliyiinta mamaulada gobolada waxaana hada socda dadaalo ay wadaan aqalka saree ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku aadan in meesha laga saare tabashada maamul goboleedyada si aysan saamayn ugu yeelan howlaha dowlada.
← Madaxda maamulada Soomaaliya oo markale war-murtiyeed Soo saaray.